HeersareMuxumed: Askarigii Sheekha Nagu Noqday. Qalinkii: Cabdishakuur Heersare
Mar keliya ayaa waxa agtayada soo joogsaday baabuur Laankuruusar ah. Waxa saaran guddoomiyaha gobolka Togdheer. Waxa aanu ahayn saddex nin oo dhalinyaro ah oo inta ay fadhi haleeli waayeen sare-joogga isku waraysanaya.
Meeshu waa Burco. Halka aanu ku sheekaysanaynnay waxay ahayd meesha baabuurta la dhigo oo waa meherad horteed.
Aniga waxa maskaxdayda ku soo dhacayay farriimo odhanaya: "Wuxuu idin odhanayaa meesha ka dhaqaaqa, maxaad meesha ka qabanaysaan? Maxaad meel u fadhiisan waydeen?" Oo maadaama oo uu askari yahay waxa aan ka filaynnaa inuu wax ammaanka la xidhiidha uu noogu soo socdo.
Salaanta islaamka ayuu markiiba nagu salaamay. Waanu ka qaaday oo weliba wuu na gacan-qaaday. Kollay ba wixii aan ka filayay wax ka duwan ayuu na la galay. Wuxuu markii ba nagu bibaabay dacwad iyo tashkiilin. Yaabay! oo is-idhi: "Tolay muxuu ka wadaa wacdiga." Illayn maskaxdayada waxa ka guuxaya shaqada askarigu inay tahay ammaan-sugid, xadhig iyo hadallo qallafsan oo handdadaad u badan. Kama wado in askartu aanay lahayn culimo ama qaar aqoon fiican u leh diinta, ee waxa aan ujeedaa inta badan qofku marka uu askari qori sita uu marko maskaxdiisa dareen iyo cabsi ayaa ku beerma.
Wacdigii ayaanu si feejignaan ah u dhegaysannay. Saddexdayadii ayuu kolba mid eegayey. Isaga kama qasna oo waxa ka go'an inuu wax noo sheego. Kollay wuu dareensanaa in waxoogaa feejignaan ahi nagu jirto. Markii uu in muddo ah wacdiga waday, ayay kollayba aniga ii caddaatay inay dhab ka tahay isla markaana uu na wacydinayo.
Maxaa tallaabadan ku dhiirrigeliyey? Markii uu wacdiga dhammeeyey, ayuu noo sheegay inuu ahaan jiray nin faraha lagaga gubtay oo dadka dhibi jiray. Qaab kastana dhaqaale iyo nolol ba ku raadin jiray, isla markaana aan xaaraanta iyo xalaasha kala eegi jirin. Qaadkana wuxuu ahaa dadka sida ba'an u cuna ee aan kala joojin karin.
Posted by HeersareMuxumed at 4:14 AM